HETSIKA TETSY AMPEFILOHA : Takian’ ny vahoakan’ ny faritra iva andeha hisotro ronono Ravalo
Feno 69 taona katroka omaly ny kandidà Marc Ravalomanana. Tafiditra ao anatin’ ny sokajin-taonana raimandreny izany. Angamba tsy tokony ho Dada intsony ny iantsoana azy amin’ izao 70 taona latsaka herin-taona izao fa efa Dadabe. 12 décembre 2018
Rariny loatra raha nanao hetsika ho fampitan-kafatra tetsy Ampefiloha ireo mponin’ ny faritra iva omaly tsy lavitra ny foiben-toeran’ ny AFT. Nandahatra yaourt teo amin’ ny arabe ireo olona marobe. Nataon’ izy ireo soratra ireo yaourt nalahatra ka nanome soratra hoe “Ravalomanana mandehanà amin’ izay misotro ronono ”.
Nahatsapa ireo vahoaka nanao hetsika fa efa nahazo taona Ingahy Ravalomanana Marc, ka tsy tokony hitondra Firenena intsony izy. “ Aoka izahay andriamatoa Marc Ravalomanana. Mandehana amin’ izay ianao misotro ronono fa avelao hoentin’ ny tanora ny Firenena. Mangataka aminao izahay mba hipetraka ho isan’ ny raiamandreny ho fakan-kevitra eto amin’ ny Firenena ianao ”, hoy Davida, raim-pianakaviana iray naneho ny heviny.
Tao anatin’ ny fihetseham-po lalina kosa no nitakian’ i Liliane, renim-pianakaviana, ny mba tsy hisisihan’ ny kandidà faha-25 intsony hitondra ny Firenena. “ Ampy izay ny nampidiran’ ny Filoha teo aloha ny Firenena tao anatin’ ny kizo. Fahendrena ho azy ny mipetraka fa efa tonga ny fahalebiazany ”, hoy hatrany izy nanohy.
Tanora aza izy tsy nahavita zavatra
Nanamarika ny fahalebiazan’ ny kandidà Marc Ravalomanana ny tsingerin-taona nahaterahany. Tao anatin’ ny fahatanorany tanteraka izy fony vao niakatra teo amin’ ny Fitondrana tamin’ ny taona 2002. Nanakoako ren-tany ren-danitra ny hoe “ Marc Ravalomanana, sady bôgôsy no mpanana ”. Nanantena ny vahoaka fa hitondra Fiovana goavana eo amin’ ny Firenena izy. Nazava rahateo ny kabariny fony vao hiakatra eo amin’ ny Fitondrana, “ tsy haka ny an’ ny mpanana fa hampanana izay tsy mbola manana ”.
Niampy fampanantenana Renault 4 isan-tokantrano izany ka nihevitra ny vahoaka tamin’ izany fotoana fa “ i Marc Ravalomanana no ilay Mesia ho an’ i Madagasikara ”. Nifanohitra tamin’ izany anefa ny zava-nisy fa tsy nitondra famonjena ho an’ ny Firenena izy fa nitondra fampahantrana. Fangoronan-karena sy fieboeboana no nanamarika ny Fitondrany tao anatin’ ny fito taona nahateo amin’ ny fahefana azy.
Isan’ ny nahavelom-panontaniana ny maro koa ny nitiavan’ Ingahy Marc Ravalomanana manokana ny “ osy ”. Nahavatra nanafatra osy avy any ivelany mihitsy izy nandritra ny fotoana nitondrany. Nahatafintohina mafy ny vahoaka teto anivon-tany anefa ny nampiakarany osy mainty tamin’ ireo vohitra tranainy somary mivoaka ny Renivohitra. Asa na fifandrifian-javatra na ahoana fa tamin’ ny fotoana nakan’ ny vahoaka ny Lapan’ Ambohitsorohitra dia mbola nahitana sarin’ osy vita tamin’ ny sarivongona tao amin’ ny biraony. Sanatria, hoy ireo mpandinika ny zava-miafina lalina, efa nanolotra ny tanindrazana ho an’ izay mitondra ny marik’ io osy io Ingahy Ravalomanana.
Tsy vitan’ izay fa nahavelon’ahiahy mafy ny mpanara-baovao ny fomba fandavana feno fisalasalana nataony rehefa nanontanian’ ny mpanao gazety izy na “ Franc Maçon ” na tsia nandritra ny ady hevitra tao amin’ ny TVM. Etsy ankilany, rehefa nofakafakaina tamin’ ny “ table maçonique ” ( fomba fandrafetan’ ny Franc maçon teny misy hery majika) ny teny hoe “ Manifesto ” izay voizin’ ny kandidà faha-25 dia manome ny marika 666. Mety ho fanazavana lalina amin’ ny ambaratonga ambony ireto farany, saingy tsy tokony hatao tompon-trano mihono amin’ izany ny vahoaka Malagasy. Fahendrena ho an’ Ingahy Filoha teo aloha ny mandeha misotro ronono amin’ izay.